Public Health in Myanmar: Role of Parents in the Childhood Mental Development
Role of Parents in the Childhood Mental Development
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ မိဘများရဲ့ကဏ္ဍ
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀က ကလေးသွားကျန်းမာရေးပညာမှာ စသင်ရတာက psychological development of children ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီအကြောင်းအရာကို အရေးတကြီးသင်ရလဲဆိုတော့၊ ကျွန်တော်တို့ သွားဆေးခန်းကို နေ့စဉ် လာပြလေ့ရှိသူတွေထဲမှာ ကလေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိဘဖြစ်သူရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်တတ်မှု ရှိမရှိပေါ် မူတည်ပြီး၊ ကလေးတွေလည်း အမူအကျင့် အမျိုးမျိုး ကွဲသွားပါတယ်။ သူတို့ကို သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုတွေ မစနိုင်ခင်မှာ ဘယ်လို psychological background နဲ့အမူအကျင့် behaviour ရှိသလဲ။ ကောင်းတဲ့ behaviour ရှိလား၊ အားနည်းချက်ရှိတဲ့ behaviour လား၊ ကောင်းတာကို ဘယ်လိုဆက်အားပေးပြီး မကောင်းတာကို ဘယ်လို အပြုသဘောဆောင်လာအောင် ပဲ့ကိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ အရင်လုပ်ရပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ မွေးခါစကနေ တစ်နှစ်သားအရွယ်ကစပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အတူ psychological development လည်း စနေပါပြီ။ အဲလိုအချိန်မှာ ကလေးဟာ ယုယုယယ ထွေးပွေ့မှုရမယ်၊ ချော့မြူမှုရမယ်၊ ဆာတိုင်း ချိုချိုသောက်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လုံခြုံနွေးထွေးမှုနဲ့ ယုံကြည်မှု စပြီးရရှိသွားပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ ဒီလိုပြုစုယုယမှုတွေ သေချာမရခဲ့တဲ့ ကလေးတွေဟာ ကြီးတဲ့အထိ၊ လောကကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယုံကြည်မှု၊ ဘယ်သူက ငါ့ကို တိုက်ခိုက်မလဲ ဆိုပြီး သံသယဖြစ်မှုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းရပါတော့တယ်။ Erik Erickson ကတော့ဒီအဆင့်ကို stage of developing trust or mistrust လို့သုံးပါတယ်။
နောက်တဆင့်ကတော့ (၂)နှစ်က(၃)နှစ်သား .... development of autonomy ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးစိတ် စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရွယ်..
ဘာမဆို.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်မယ်.. ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ လူကြီးက အရာရာ ဟိုမလုပ်နဲ့ဒီမလုပ်နဲ့ ချုပ်ချယ်လွန်းရင်၊ စိုးရိမ်လွန် အချစ်လွန်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဘာမှပေးမလုပ်ဘဲ မိဘက အရာရာလုပ်ပေးနေရင် ကလေးဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်အားကိုးမှု မရှိတော့ပါဘူး။ အလွန်အကျွံ လွှတ်ပေးရင်လည်း စည်းကမ်းမဲ့တဲ့ကလေး ဖြစ်လာတတ်တာမို့ rules ဆိုတဲ့ ဘောင်လေးတွေ စပြီးချပေးရပါတယ်။
ဥပမာ - ထမင်းဝိုင်းမှာ ကိုယ်စားချင်တဲ့ဟင်း ကိုယ်တိုင်ထည့်စား.. ဒါပေမယ့် ကုန်အောင်စားရမယ်.. စတဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် တာဝန်ယူတဲ့စိတ် မွေးမြူပေးရပါတယ်။ အလိုလိုက်လွန်ရင် ငါဘာလုပ်လုပ်မှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှမဟန့်တားနဲ့ ဆိုတဲ့ ငါတကောစိတ်ဓာတ်တွေ ကြီးတဲ့အထိ ပါသွားပါလိမ့်မယ်။
(၄)နှစ်သားအရွယ်ကိုတော့ terrible four လို့ခေါ်ပါတယ်။ autonomy ရချင်တာ သိပ်များလာလို့ ထိန်းရနဲနဲခက်လာပြီး စိတ်မလိုရင် ဒေါသထွက်တာ စတာတွေပြတတ်လာပါပြီ။ လူကြီးက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ မထိန်းကျောင်းရင် ကြီးတဲ့အခါ အလိုမကျ ရန်လိုတဲ့သူတယောက်အဖြစ် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထီးကျန်တတ်ပါတယ်။
(၅)နှစ်က၁၀နှစ်ကျော်အထိ... ဒီအရွယ်ကျတော့ ကျောင်းစနေပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျယ်ပြန့်ပြီး သင်ယူစရာတွေ များလာပြီလေ။ တံငါနားနီးတံငါ- အကျင့်တွေ ကူးတတ်တဲ့အရွယ်ပါ။ Role model ဆိုတဲ့ ဖန်တီးရှင်တို့၊ မင်းသားမင်းသမီးတို့ စတာတွေအပြင်၊ အပြင်လောကမှာ တွေ့ရတာတွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်ရာ လိုက်အတုယူချင်စိတ် ပေါက်လာတဲ့အရွယ်ပါ။ ကြီးရင် ဘာလုပ်မယ် စတဲ့ အတွေးလေးတွေ စပေါ်လာပြီး ကောင်းတဲ့ဘက်ကို လူကြီးက ထိန်းညှိပေးရပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့ အများစုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ သဘောတူမှု မတူမှုစတဲ့ ကွဲပြားမှုရှိတာတွေကို မြင်လာ လက်ခံလာတဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ သူတို့ကျောင်းမှာ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ မိဘကို ရင်ဖွင့်ချင်ကြတယ်။ မိဘတွေက အလုပ်များလို့ဖြစ်စေ၊ ဂရုမစိုက်တဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေ ပြည့်လာပြီး လောကကို မကျေနပ်စိတ် အဆိုးမြင်စိတ်တွေ ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ဒီအရွယ်မှာ ပိုဂရုစိုက်ပြီး မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ ခတ်တတ်ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု.. ဥပမာ - အတန်းထဲမှာ အဆင့်ကောင်းတာ စတာကို ချီးမွန်းပေးရပါတယ်။ ကလေးဆိုတာချီးကျူးတာကိုဘဲကြိုက်တယ်၊ အပြစ်တင်ခံရတာကို မလိုလားပါဘူး။ အပြုအမူတခုအတွက် ချီးကျူးခံရရင် ဆက်ပြီး အဲဒါကို ထိန်းချင် ကြိုးစားချင်လာကြပါတယ်။
ဒီလို ငယ်စဉ်ဘ၀အဆင့်ဆင့်မှာ မိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မချစ်တတ်ရင် နှစ်ရာရောက်မှာပါ။ ရှောင်ရမှာတွေက
(၁) overindulging အလွန်အကျွံ အလိုလိုက်တာ... naughty boy, naughty girl တွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ အဲလို ကလေးတွေ ဆေးခန်းလာရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်။ ကလေးရေ.. ပါးစပ်ကလေးဟနော်.. ဆိုရင်မဟဘူး။ တချို့ ဆိုးလွန်းတဲ့ကလေးဆို ဆရာဝန်ကိုရန်လုပ်တာ၊ တံတွေးနဲ့ထွေးတာတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ နယ်မှာတုန်းက သွားနှုတ်ရင် ဒါးနဲ့ထိုးမှာနော်..ဆိုပြီး ခဲချွန်ဒါးလေး ဖွက်ကိုင်လာပြီး ခြိမ်းခြောက်တာ ခံရဖူးပါတယ်။ (၁၁)နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးပါ။ သိပ်ရန်လိုတဲ့ကလေးကို အဲဒီတကြိမ်ဘဲ ကြုံဖူးပါတယ်။ ပါလာတဲ့လူကြီးက ဆရာရေ.. သူနာမှာ ကြောက်လို့လားမသိဘူး။ ဖြစ်ပါ့မလား စသည်ဖြင့် ကလေးဘက်က ၀င်ပြောပေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဆို ပိုဆိုးရောပါဘဲ။ ပိုဆိုးလာရင် မိဘကို ကုသခန်းထဲ ပေးမ၀င်ဘဲခွဲထားရပါတယ်။ Rule တွေပြောပြရပါတယ်။ သား ဒီဆေးခန်းလာရင် ဒီလိုလုပ်ရမယ်၊ အိမ်မှာလိုမရဘူး။ မပြီးရင်မပြန်ရဘူး၊ စသည်ဖြင့် ပြောပြရပါတယ်။ ဘေးမှာ ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ် လိမ္မာစွာနဲ့ ကုသခံနေတဲ့ အရွယ်တူကလေးတွေကို role model အဖြစ်ပြပြီး အတုယူစေရပါတယ်။
(၂) overprotection အလွန်အကျွံ ချုပ်ချယ်တာ... Shy and timid ရှက်တတ် ကြောက်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာစေပြီး လူတောမတိုးပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ မေမေ ဒီနားလာ.. လက်ကိုင်ထား.. ကြောက်တယ် စသည်ဖြင့် ဆေးခန်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲလိုကလေးမျိုးကျတော့ မိဘကိုအနားမှာ နေစေပြီး၊ သူယုံကြည်မှု ရလာအောင်၊ ဆေးခန်းခုံက ခလုတ်လေးတွေ နှိပ်ခိုင်း.. ရေပန်းလေးတွေပန်းခိုင်း၊ လေလေး မှုတ်ခိုင်း.. ကိုယ့်သွားကို မှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာ စတာတွေနဲ့ ငြင်ငြင်သာသာ စပျိုးရပါတယ်။ တန်းပြီးတော့ သွားကို drill နဲ့ သွားပိုးစားတာကုန်အောင် ခြစ်တာ၊ ထုံဆေးထိုးတာ စတာတွေလုပ်ရင် ကလေးကြောက်သွားပြီး ဆက်ကုလို့ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အတင်းဆက်ကုရင်လည်း ကြီးတဲ့အထိ သွားကုဖို့ဆို ကြောက်သွားတဲ့အထိ စိတ်အနာ ရတတ်ပါတယ်။
(၃) maternal anxiety အမေဖြစ်သူရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲမှု... ကလေးမှာလည်း စိုးရိမ်တတ်၊ ကြောက်တတ်တာမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကြောက်စရာ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ပျော်စရာမကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကလေးရှေ့မှာ မပြောဖို့၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ မပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေဟာ နောင်လူကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်တွေကို လွှမ်းမိုး အကျိုးသက်ရောက်တတ်တာမို့ အလေးထားပေးကြဖို့ အသိမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
Labels: Child health, Child psychology, Family health, Psychology
မိဘဖြစ်နည်း သင်တန်းမှ မရှိတာဘဲလို့။
မိဘတွေက သူတို့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တာလေးတွေတော့ သားသမီးတွေကို လုပ်ပေးကြတာပဲ။
စေတနာ အမှားတွေက မနည်းဘူး။
မြန်မာ မိဘတွေရော၊ လူကြီးတွေမှာပါ ငယ်သူတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ လွန်ကဲနေတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ။
ထိန်းချုပ် ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လဲ ယုံမှတ်ထားကြတယ်။
ပြီးတော့ သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောပြပြီး ဆုံးမမှ လိမ္မာမယ်လို့ ထင်ကြတာလဲ များထင်လို့ မြင်မိတယ်။
အဲဒါတွေက မောင်နှမတွေကို သွေးခွဲပစ်သလို ဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
self-esteem တွေကိုလဲ ကျစေတယ်။
အင်း - မိဘကို ပြောရင် ငရဲကြီးမယ်ဆိုတော့ ပြန်မပြော နားမထောင် ကိစ္စလေးတွေ များလာရော။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး လျှောက်တွေးမိလာတာပါ။
ဆရာရေ အင်မတန် ဗဟုသုတရတဲ့ ဆောင်းပါးပါပဲ။ မိတ်ဆွေတွေကိုတောင် မိတ္တူကူးပေးမယ် စိတ်ကူးတယ်။
Stroke Experience of A Brain Scientist
Tea Leaves Announcement
Legal protection of patients with mental illness
Role of Parents in the Childhood Mental Developmen...
Different Ways of Contraception
How To Cope With Culture Shock ?
Something About Culture Shock
Some Health Behavior Theories - II
Some Health Behavior Theories - I